Aya ndiwo maratidziro anoita Phantom 4 drone pane masherufu eApple Chitoro | Ndinobva mac
Izvi ndizvo zvinoita Phantom 4 drone pamashefu eApple Chitoro
Zvese zvakakomberedza Apple Chitoro zvakafanana nekubudirira uye varidzi vekambani DJI, musiki wePhantom drones vanozviziva. Kubva pamamodeli ayo ekutanga iyi mhando yedrones yakaratidzirwa nekusimba kwayo uye mhando uye ikozvino, Nekuvhurwa kweshanduro yechina ivo vakapa "bhero".
Kana isu tichitaura nezve bhero, isu hatisi chete kureva kuti iyo Phantom 4 modhi yakanaka kwazvo asi zvakare kuti vakabatana neApple kuitira kuti iyo Apple Chitoro ive inotarisira kuitengesa, pakati pevamwe vazhinji vanogovana. Kugona kutengesa drone muApple Chitoro kunenge kune kumashure kwemaawa mazhinji ekutaurirana asi pakupedzisira isu tatova kuona kuti vanogara munzvimbo ine rukudzo mavari.
Mavhiki mashoma apfuura nhau dzakabuda kuti kambani DJI, mutungamiri mukugadzirwa kwedrones, yakanga yasvika pachibvumirano neApple kuitira kuti vashandi veApple Store pachavo varatidze uye vatengese iyo nyowani yedhoni modhi, iyo Phantom 4. Iyo idrone yakachinja zvakanyanya ichienzaniswa ne yayo yapfuura vhezheni, kunyange kubhururuka pasina chinhu uye hapana chakaderera pane 70 km / h. Uye zvakare, iko kuzvimiririra kwebhatiri rayo kwagadziriswa, kamera inoita zvinyorwa mu4K yakawanikwa uye pamusoro payo ine makamera mana, maviri kumberi uye maviri kumashure anoita kuti zvikwanisike kuti isabatane nezvinhu uye kuti inogona kutevera zvidzidzo zvinofamba.
Aya anga ari mafivha eApple erudzi urwu rwema drones ayo vashandi veApple Store vakarairwa mukubata kwerudzi urwu rwechigadzirwa kuitira kuti muApple Store pachezvayo vagone kufadza vashanyi nendege dzeacrobatic dzakafanana. Nhasi tanga tichikwanisa kuona mafoto eApple Stores ekutanga ayo atova neiyi drone modhi inowanikwa, iyo Phantom 4.
Ichokwadi ndechekuti, sezvatinoona mumufananidzo wakasungirirwa, Iva nenzvimbo yakakosha mukati meApple Chitoro uye zvinokwanisika kuti kana iwe ukapinda mune chimwe chazvo hauzoone drone nenhumbi dzayo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Store » Izvi ndizvo zvinoita Phantom 4 drone pamashefu eApple Chitoro
iyo phantom 3 imushini iyo 4 inotaridzika inotyisa
A mashoma ematare anoonekwa eanofungidzirwa matsva iPhone "iPhone 5se"
Mutambo Wakanyarara Zera, uri kutengeswa kwenguva shoma